एसएसएल र एसईओ: के उनीहरूले दुवै कुरा गर्छन्?
आइतबार तपाईंको केही हालका खोजीहरूको सम्झनाको सम्झना सुरू गरौं, तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ वा तपाईका विरोधीहरूलाई जाँच गरी वेबमा केहि उत्पादनहरू वा सेवाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ।. तपाईंले सम्भवतः HTTP र HTTPS मा आधारित वेब पेजहरू भ्रमण गर्नुभएको छ. तर के बीच वास्तविक फरक फरक के छ, खासकर SSL र एसईओ को दृष्टिकोण देखि? ई-वाणिज्य र प्रायः प्रत्येक वेब भण्डारमा आफ्नो पारस्परिक प्रभावलाई ध्यान दिँदै, आइएसएस र एसईओ कतिपय वास्तविकतामा के गर्दै छन् भनेर हेरौं.
के तपाईं SSL र SEO सँगै काम गर्ने बेला उपयोगी छन्?
चलो केही टेक्निकल पृष्ठभूमिको साथ सुरू गरौं र हेर्नुहोस् कि एसएसएल कसरी कार्य गर्दछ. हाइपरटेट ट्राभल प्रोटोकल सुरक्षाको भाग हुनु भएको छ, यो प्रयोगकर्ता सर्भर को प्रमाणीकरण, प्रमाणिकरण, र इन्टरनेट सर्भर र इन्टरनेट ब्राउजर बीचको एन्क्रिप्शन को माध्यम ले प्रयोगकर्ता अनुभव को संरक्षण को लागि 2048 बिट कुञ्जी को उपयोग गर्दछ।. मूलतः, एसएसएल सुरक्षा तीन परतहरूमा आउँछ:
वर्तमान प्रयोगकर्ताको कार्यहरू अपरिहार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नका लागि इन्क्रिप्सन कार्यहरू गर्दछ, त्यसैले कुनै पनि जानकारी स्क्यानरहरू द्वारा
प्रमाणिकरण प्रक्रियामा हाइज्याक गर्न सकिँदैन।
डेटा अखंडताले भ्रष्ट वा अनधिकृत परिमार्जनबाट कुनै पनि फाईलहरू ट्रान्सफरको समयमा
र अन्तमा फर्कनुहोस् बिन्दुमा - एसएसएसएल र एसईओ बीचको वास्तविक जडान के हो? वा तपाइँको वेबसाइटको रैंकिंग खोजी इञ्जिन परिणाम पछाडिमा कसरी ड्राइभ गर्ने सुरक्षा छ? जस्तै तपाईंको राम्रो रैंकिंग गुणहरू तपाईंको रैंकिंगमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउन, साथै ट्राफिक र रूपान्तरण दर मात्र. मेरा मतलब तपाईको वेबसाइट सुरक्षामा Google को खोजी एल्गोरिदममा सीधी प्रभाव छ जब तपाईं उच्च रैंकिंगको साथ पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गर्दछ. तलबाट एसएलसी र एसईओ बीचको आधारभूत सम्बन्धहरू तीन आधारभूत निर्देशनहरू - रैंकिंग, ट्राफिक, र रूपान्तरणमा सम्बन्ध राख्नुहोस्:
पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, तपाईको वेबसाइट रैंकिंग अब SSL सुरक्षा भन्दा पहिले भन्दा बढी भन्दा बढी निर्भर. 2014-2014 मा फिर्ता खोज्दा Google ले यसको पहिलो एल्गोरिदमलाई HTTPS-आधारित वेब पृष्ठहरूको पक्षमा जारी गरिसकेपछि, SSL सुरक्षा अन्तिम निर्णय गर्नका लागि मात्र एक हल्का एल्गोरिदम घटक प्रयोग भएको थियो।. तर आज, आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार, Google को जैविक खोजी परिणामहरू लगभग SSL प्रमाणपत्रसँग सुरक्षित HTTPS आधारित वेबसाइटहरूमा उल्लेख गर्दै छन्।. यसबाहेक, इन्टरनेटमा सबै अनलाइन ढाँचाका लगभग 1 प्रतिशत सुरक्षित अनुमान गरिएको अनुमान छ. त्यसोभए, किन SSL र SEO को प्रयोग गर्न को लागी बस एक पल्ट र सदाको लागि अगाडी बढन को लागी?
ट्राफिक लाभहरू हेर्दा, राम्रो स्तरवृद्धिले प्राय: ट्राफिक प्रवाहलाई उद्धार गर्दछ, किनभने किनकि प्रयोगकर्ताहरू तपाईंको वेबसाइटमा गएका छन्, तपाईका दर्शकहरू संलग्न हुनेछन्।. यसबाहेक, उपलब्ध वेब सुरक्षाले हरेक सम्भावित खरिदकर्तालाई तपाइँको वेबसाइट प्राधिकरण र विश्वसनीयतामा इन्टरनेटमा सक्रिय संकेत ब्राउज गर्दछ. धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सबै गैर-सुरक्षित स्रोतहरू छोड्न र उनीहरूको वेब पृष्ठहरूमा ड्राइभिङ्ग खोजी परिणाममा क्लिक गर्नु पर्दछ, तपाईंको साइटको सीटीआर दर बढाएर.
सबै पछि, एसएसएसएल र एसईओ सँगै तपाइँको रूपांतरणहरूमा प्रभाव पार्न एक साथ काम गर्न सकिन्छ. मेरा मतलब छ कि अधिक सम्भावित ग्राहकहरूलाई वास्तविक मा परिणत गरिने छ, एक पटक उनीहरूले एक विश्वसनीय प्राधिकारी संग राम्रो तरिकाले सुरक्षित वेबसाइट भ्रमण गरे. केवल याद छ कि प्रमुख सर्वेक्षण अनुसार, 80% अपरिभाषित क्लाइन्टहरू भन्दा बढी उनीहरूको खोजीमा खरिद गर्न खरिद गर्न अस्वीकार गर्दछन्, केवल उनीहरूको भर्खरै व्यक्तिगत डाटा डाटा असुरक्षित जडानको माध्यमबाट आउँछ Source .